‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा लगानीकर्ता – Janasamsad
२९ असार २०७८, मंगलवार १५:३२ मा प्रकाशित
मंगलबार नेपाली धितोपत्रको दोस्रो बजारका लगानीकर्ताहरु ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको देखिएका छन् ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतले दिएको संसद पुनस्र्थापना र शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने दिएको आदेशले अबका दिनमा देशको राजनीतिले कस्तो रुप लिन्छ भन्ने अन्योलका कारण लगानीकर्ताहरु सो अवस्थामा पुगेका हुन्।
सरकार परिवर्तन भएसँगै नयाँ अर्थमन्त्री को आउने हुन्? र उनले पूँजीबजारका लागि के नीति ल्याउने हुने? भन्ने चासो हरेक लगानीकर्ताहरुमा रहेको छ। जसले गर्दा लगानीकर्ताहरु अहिले ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा पुगेको जानकारहरु बताउँछन्।
यद्यपी, मंगलबार नेप्से परिसूचक १६.३४ अंकले बढेर २८७१.०३ विन्दुमा पुगेको छ। यसले लगानीकर्ताहरु नयाँ सरकारप्रति आशावादी भएको संकेत गरेको उनीहरुको भनाइ छ। यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ४.७४ अंक बढेको छ भने फ्लोट इण्डेक्स १.२८ अंक र सेन्सेटिभ फ्लोट इण्डेक्स १.७२ अंक बढेको छ।
नेप्से बढेपनि यस दिन कारोबार रकममा भने गिरावट आएको छ। सोमबार करिब १० अर्बको शेयर कारोबार भएको बजारमा यस दिन २२३ कम्पनीको ५३ हजार १३९ पटकको कारोबारमा ५ अर्ब ५४ करोड ६३ लाख रुपैयाँबराबरको १ करोड २३ लाख ४८ हजार कित्ता शेयर खरिदबिक्री भएको छ।
यस दिन कारोबारमा आएका १२ उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने १ को परिसूचक घटेको छ। यस दिन वित्त उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक ४.०३ प्रतिशत बढेको छ। त्यसैगरी, विकास बैंकको १.५४ प्रतिशत बढेको छ। कारोबारमा आएको जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक भने यस दिन ०.३९ प्रतिशत घटेको छ।
कारोबार रकमका आधारमा यस दिन नेपाल बङ्गलादेश बैंक शीर्ष स्थानमा रहेको छ। सो बैंकको यस दिन ४५ करोड ४७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर खरिदबिक्री भएको छ। त्यस्तै, यस दिन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको छ।
मंगलबार सेन्ट्रल फाइनान्स, समृद्धि फाइनान्स, मञ्जुश्री फाइनान्स, प्रोग्रेशिभ फाइनान्स र आइसीएफसी फाइनान्सको शेयरमूल्य ६ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ भने एनआईसी एशियाको ऋणपत्रको मूल्य पनि ६ प्रतिशतभन्दा बढी बढेको छ।
यस दिन सानिमा लार्ज क्याप फण्डको इकाईमूल्य सर्वाधिक ३.०८ प्रतिशत घटेको छ भने अन्य कम्पनीहरुको शेयर २ प्रतिशतभन्दा कम दरमा घटेका छन्।
‘भाषा, साहित्यले चिनाउँदैछ काँकरभिट्टा’